10 Ama-Zoo Ahamba Phambili Wokuvakashela Nezingane Zakho EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Ama-Zoo Ahamba Phambili Wokuvakashela Nezingane Zakho EYurophu
Isikhathi sokufunda: 7 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/11/2020)
Ukuhamba nezingane eYurophu kungaba yinselele. Ngakho, kubaluleke kakhulu ukwengeza imisebenzi embalwa izingane ezingayijabulela, njengokuvakashela kwenye ye- 10 ama-zoo amahle kakhulu eYurophu. Amanye ama-zoo ahamba phambili emhlabeni aseYurophu. Enhliziyweni ye amadolobha amahle kakhulu e-Europe, kunezindawo ezingcwele eziluhlaza, kanye 10 ama-zoo amahle kakhulu ukuvakashela nezingane eYurophu.
Izitimela kuyindlela enobungane kakhulu imvelo uvakashe. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Gcina Isitimela, Amathikithi Eshibhe Kakhulu Awezitimela Emhlabeni.
1. ISchonbrunn Zoo EVienna
Schonbrunn I-zoo eVienna, ibuye ikhaya le 500 izinhlobo zezilwane, kusukela 1752. Ngokwesibonelo, i-zoo endala kunazo zonke eYurophu iyikhaya lendlovu yase-Afrika ne-panda enkulu. I 42 amahektare ama-zoo aseViennese atholakala esigodlweni futhi anokuheha okumangazayo kwezingane nabazali.
Ngokwesibonelo, indlu yamahlathi emvula e-zoo iyisifanekiso esesabekayo esenziwe ngumuntu sehlathi lemvula langempela elinokuduma kwezulu. Njengoba uzulazula ukubheka ama-otters amancane anezinhlamvu zase-Asia kanye nezinkalankala ze-vampire. Ngaphezu kwalokho, Indlu yebhere elimhlophe, amahlosi nengulule, indlu yaseKoala nemizi eminingi yezilwane ezinhle zikulindile.
Ukungena kweSchonbrunn Zoo eVienna kumahhala ngokudlula eVienna. Ungafika lapho nge-U4 Hietzing ngaphansi komhlaba.
2. 10 Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eYurophu: I-Alpine Zoo e-Innsbruck
Akhiwe obumangalisayo ITroli e-Austria, i-zoo ye-Alpine e-Innsbruck iyikhaya elingaphezu kwe- 150 kwezilwane. Uzothola le zoo emangalisayo ngaphansi kohambo lwezintaba zaseNordkette e-Austrian Alps. Ngakho, uma uhlela uhambo lomndeni oluya e-Alps, qiniseka ukwenza isikhathi se-Alpenzoo Innsbruck.
Izingane zakho zizomangala ngokuphelele ngamabhere ansundu, I-Lynx, izinkozi zegolide, ama-otters, nomlilo intulo. Lezi ngezinye nje zezinhlobo zezilwane ozozibona e-Alpine zoo. Ngenkathi izingane zakho zizobe zibabaza izilwane, uzothathwa ngu ukubukwa emangalisa.
Ungafika kule zoo emangalisayo ngezithuthi zomphakathi, ukusuka enkabeni yedolobha. Ngaphezu kwalokho, kunezinketho ezahlukahlukene zokuphasa zoo ezilungele isabelomali, ukuze ukwazi ukubona konke.
3. I-Zoo Engcono Kakhulu E-Czech Republic: IPrague Zoological Garden
IPrague idume ngamabhuloho ayo amahle, ukubukwa okuhle, izakhiwo, namaqembu. Nokho, ababaningi abantu abazi ngezu lasePrague, futhi leyo yindawo yokuhlonishwa phakathi kwama-zoo amahle kakhulu eYurophu ukuvakashela nezingane.
o.5 amakhilomitha-skwele enza i-Prague zoo ibe enye yama-zoo amakhulu kakhulu eYurophu, izindlu ezingaphezu kuka 4000 izilwane. Ngakho, kunenqwaba yamadokodo nezilwane okufanele zibingelelwe, Ngokwesibonelo, Indlovu uShanti, Bikira, igorila enobungane, nezilwane eziningi ezihlukile futhi ezinhle.
Ingadi yezilwane yasePrague ivulekile nsuku zonke futhi iyatholakala ngebhasi noma ngethilamu. Ithiphu yethu yokuzijabulisa komndeni ePrague ukuhlela uhambo losuku olugcwele lomndeni oluya e-zoo yasePrague ngoba izingane zakho zizofuna ngokuphelele ukukuhlola konke.
4. 10 Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eYurophu: Ingadi yaseBerlin Zoological
I-zoo endala kunazo zonke eJalimane iyikhaya lezilwane ezithile ezingavamile emhlabeni. I-flamingo yaseChile ne-African Penguin ngezinye nje zezakhamuzi ezikhethekile ozohlangana nazo ekuvakasheni komndeni wakho e-zoo yaseBerlin. Izilwane ezingavamile nezingavamile zenza iBerlin ibe enye yama-zoo amahle kakhulu ukuvakashela nezingane zakho eYurophu.
IBerlin Zoological Garden itholakala maphakathi nenye amadolobha athakazelisa kakhulu eYurophu, futhi i-zoo nayo iyathinteka. Uma usedolobheni ngempelasonto ende, khona-ke kufanele nakanjani wenze isikhathi sosuku e-zoo, amadokodo, kanye ne-aquarium.
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngale zoo ukuthi zikhona amanani akhethekile wamathikithi yemindeni emincane noma emikhulu, ukungena okukodwa esiqiwini, noma i-combo ngokungena e-aquarium.
5. I-Zoo Epholile Kunazo Zonke E-Hamburg: I-Hagenbeck Zoo
IHamburg yinhle indawo yokuphumula yedolobha, nedolobha elijabulisayo ukuvakashela nezingane. IHagenbeck Tierpark eHamburg yisibonelo esisodwa sezinto ezimnandi zokwenza eHamburg nezingane. Ingenye yezindawo ezipholile kunazo zonke eYurophu naseJalimane. Ikhaya elinomoya ovulekile elingaphezu kwe- 1,800 izilwane, le zoo enhle ine-Arctic Ocean. I-Arctic Ocean yilapho uqala khona ukuzijabulisa komndeni, futhi uvakashele amabhere asezindaweni eziphakeme, amaphengwini, namabhere asolwandle.
Uma useHamburg izinsuku ezimbalwa, lapho-ke kufanele uthole i-Hamburg Card. Ngale ndlela uzojabulela izaphulelo ezinhle izivakashi, kanye nezaphulelo ku-zoo kanye ne-aquarium eshisayo e-zoo.
Amanani eBerlin aya eHamburg
I-Bremen iya eHamburg amanani entengo
IHanover iye eHamburg Izintengo Zezitimela
Cologne ukuze Hamburg zemininingwane amanani
6. I-Antwerp Zoo EBelgium
Okukodwa okuphezulu 10 ama-zoo amahle kakhulu eYurophu yi-Antwerp Zoo. Njenganoma yimaphi ama-zoo amangalisayo ohlwini lwethu, e-Antwerp Zoo ungazithanda izilwane ezinhle kakhulu emhlabeni. Nokho, enye yezinto ehlukanisa i-Antwerp Zoo kwamanye ama-zoo, wuhlelo olukhethekile lwezilwane ezisengozini, njengama-bonobos ne-okapi.
I-zoo ehamba phambili eBelgium iye yanda kakhulu phakathi neminyaka. I-zoo isikhule kakhulu kangangoba ayikho maphakathi nedolobha, eduze kakhulu nesiteshi saseCentral. Ngaphezu kwalokho, iSkywalk yezu izoveza kakhulu umbono obabazekayo we-panoramic yezingadi nenye ye emadolobheni aseYurophu.
7. I-La Palmyre Zoo E-Les Mathes, France
Indawo yezilwane enhle yaseLes Mathes eLa Palmyre itholakala emahlathini aluhlaza nezindunduma. Kunemizila emakiwe ekuhambisa wena nezingane ohambweni oluzungeze umhlaba wezilwane kanye nezimangaliso zemvelo kwelinye lama-zoo amahle kakhulu eYurophu.
Izingonyama zasolwandle zasendle namakati asendle, I-Carreabean flamingos, nezimfudu ezinkulu, yizilwane ezimbalwa ezikhethekile ozohlangana nazo. Le zoo enhle itholakala esifundeni saseNew Aquitaine eFrance, ogwini lwe-Atlantic, i-adventure enkulu kusuka EParis ngesitimela.
8. I-Artis Zoo E-Amsterdam
Vele 15 imizuzu ukusuka enkabeni yedolobha, uzothola i-zoo yokuqala e-Amsterdam nenye yama-zoo amahle kakhulu eYurophu. I-Artis Royal Zoo iyikhaya lamadube, izimvemvane, izinhlanzi ezishisayo, nezidalwa ezincane kakhulu ezizothumba izingane zakho, ngesikhathi UBUCIKO-Micropia.
A ukuvakashelwa e-zoo yase-Amsterdam kungenye yezinto ezinhle kakhulu zomndeni ongazenza e-Amsterdam. Enenqwaba yamadokodo, ku-aquarium, nezihlahla ze-oki ezindala, i-Artis Zoo e-Amsterdam ingenye yezindawo ezinhle futhi izindawo ezikhethekile ongazivakashela uma useNetherlands.
Kungcono uthenge ithikithi le-Artis Zoo neMicropia ukuze ujabulele yonke into i-Amsterdam Royal zoo enikezayo.
9. I-Zoo ehamba phambili eNgilandi: UChester Zoo
I-zoo enkulu kunazo zonke eNgilandi itholakala UCheshire futhi uyikhaya labangaphezu kuka- 35,000 izilwane. I-Chester zoo ingenye yama-zoo amahle kakhulu eYurophu ukuvakashela nezingane zakho ngoba kunezilwane eziningi nezingadi ongazihlola. Kukhona izilwane ezivela nxazonke zomhlaba, njengama-lemurs, uphondo olukhulu, uphondo, nezilwane eziningi ezihlukile.
Futhi, uma unesikhathi sokunweba ukuphuma komndeni wakho, qiniseka ukuthi uvakashela izingadi ezithandekayo e-zoo. Amaqoqo ezimbali eChester zoo anegama elidume umhlaba wonke, kanti ama-orchid ahluke ngokuphelele. Ukuvakashela e-Chester zoo kungumsebenzi ophelele womndeni ongaphandle.
10. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eYurophu: I-Basel Zoo eSwitzerland
I-zoo ehamba phambili eSwitzerland itholakala enhliziyweni yeBasel. I-Basel zoo iyikhaya lezilwane ezivela emhlabeni wonke, futhi uzothola sonke isilwane esisodwa kumhlali waso wemvelo ezindaweni ezivalekile ezahlukahlukene.
Enye into emangalisayo ebeka iBasel zoo yethu 10 ama-zoo amahle kakhulu eYurophu, yi-zoo yezingane. Lapha izingane zakho zizothola ithuba eliyigugu lokuhlangana nezilwane ezifuywayo ezivela emhlabeni wonke, isilwane, bese ubapha ukudla.
Ukuvakashela e-zoo kungumsebenzi ongaphandle omangalisayo womndeni wonke. Izingadi eziluhlaza namahlathi, izilwane nezitshalo ezingavamile, izothakazelisa futhi ijabulise izingane. I 10 ama-zoo amahle kakhulu eYurophu ukuvakashela nezingane zakho, ayigugu elifihlekile laseYurophu, futhi kufanele okungenani uhambo losuku olugcwele.
EMunich kuya eBasel Izintengo Zesitimela
Izintengo zeBern kuya eBasel Train
IGeneva iye eBasel Izintengo Zezitimela
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele ukuvakashelwa okumangalisayo kuma-zoo amahle kakhulu eYurophu ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi yethu “Ama-Zoo Ayishumi Ahamba Phambili Ukuvakashela Nezingane Zakho EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
adventure I-BestzoosEurope I-EuropeTraveling Ama-Europewithkids iholide lomndeni izingane Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Travelingwithkids i-zoo